China American American Lunch Box650ML mpanamboatra sy mpamatsy | XINLONG
Laharana maodely XL650 fahafahana 650ML
Size 160 * 160 * 50mm lanja
andian-dahatsoratra Kianja Style American
Voankazo, legioma, salady, paty, sushi, Bento, sakafo
Sariaka ara-tontolo iainana, azo ariana, tahiry, mafy
Misy santionany maimaim-poana
30% T / T mialoha ary 70% alohan'ny fandefasana
Mety amin'ny trano fisakafoanana, hotely, fety isan-karazany, lasy sns.
Ny vokatray ao anatin'izany
(1) Kopy taratasy kafe (7) Kopy puce mafana (13) Kitapo fiantsenana taratasy
(2) kaopy gilasy (8) fonosana Burger (14) Napkinina vita pirinty
(3) kaopy yaourt vita amin'ny volo (9) Kaontenera lasopy (15) boaty mofomamy
(4) Kaopy fisotro mangatsiaka (10) Kaopy plastika (16) Cutlery plastika
(5) Kopa vita amin'ny rindrina roa (11) boaty Pizza (17) Saron-taratasy
(6) kapoaka tànana (12) Kitapo fonosana sakafo (18) Vavy
1. Manana mpamorona matihanina izahay, koa raha mila logo manokana ianao dia andefaso anay ny sary fotsiny dia hovolavolainay malalaka ho anao izany.
2. Ny mailaky ny mpanjifa dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora, azafady aza misalasala mifandray aminay raha mila izany ianao.
3. Ny vokatray rehetra dia nandalo ny fitsapana ny ISO sy ny FDA, manana QC izahay hanamarina ny entana alohan'ny fandefasana, noho izany dia miantoka ny habetsahana sy ny kalitaon'ny mpanjifa izahay.
4. Manome santionany maimaimpoana izahay.
5. Ny vokatray dia manana vidiny mifaninana sy avo lenta.
6. Serivisy tsara sy fanaterana ara-potoana no foto-kevitray.
1. Inona ny teny fonosanao?
Amin'ny ankapobeny dia mampiasa fanaterana baoritra mitafo mafy 7 sosona izahay. Hiaro ny kaopy amin'ny fahavoazana izahay, ary ny fonosana amin'ny haben'ny kapoaka ihany no soratinay ivelan'ny baoritra, raha mila manonta marika ianao, azafady mifandraisa amin'ny mpivarotra mba hanampy an'ity vaovao ity alohan'ny filaminana.
2. Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
T / T 30% toy ny petra-bola, ary 70% alohan'ny hampisehoana aminao ny sarin'ny vokatra ary alohan'ny handoavanao ny mizana.
3. Ahoana ny amin'ny fotoana andefasana anao?
Amin'ny ankapobeny dia maharitra 15 andro aorian'ny nahazoanao ny hany karamanao handoavana ny vola mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
4. Afaka mahazo santionany hijerena ny kalitao alohan'ny filaminana ve aho?
Azo antoka fa manome santionany maimaim-poana izahay ary mety ho an'ny mpanjifa ny vidin'ny fandefasana.
5. Inona ny dingana fanaraha-maso kalitao?
Manana sampana fanaraha-maso kalitao manokana izahay, fanaraha-maso ny akora, fanaraha-maso fanontana, fitsapana mamoaka tsirairay ora mandritra ny fizotry ny famokarana.
6. Inona no fanamarinana anananao?
7. Azoko atao ve ny mahita porofon'ny vokariko vita pirinty amin'ny sangan'asako alohan'ny hanombohana ny famokarana?
Ny fomba fanao mahazatra anay dia ny mandefa mailaka aminao (PDF Portable Document Format) ho anao alohan'ny hanombohana ny famokarana. Izany dia mety amin'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria mampihena ny vidiny, azo atao haingana, ary ahafahan'izy ireo mahita ny fomba fijerin'ny endrik'izy ireo amin'ny faritra azo printy amin'ny vokatra.
8: Ahoana no ahafahako mahazo teny nalaina marina?
Azafady mba lazao anay ny habetsahana, inona ny vokatra, ny habeny, mba hahafahanay mitanisa ny vidiny marina ho anao.
Teo aloha: Kitapo fisakafoanana an-tsokosoko boribory 1000agon
Manaraka: American Rectangular Lunch Box 750ML